China DIN 125 Mpanamboatra sy mpamatsy vy vita amin'ny metaly milina savony | Tianbang Fasteners
zavatra Fanasana lamba fisaka; Mpanasa lemaka
Vokatra lehibe DIN125 DIN9021
Teny lehibe Mpanasa boribory fisaka
ara-nofo Haja karbonika: Q195, Q235, 1035, 1045, 65Mn
farany Plain, Zinc Plated (Mazava / Manga / Mavo / Mainty), mainty, HDG, Dacromet
Fonosana Kitapo / baoritra + 5kg 5kg 5kg + pallet na namboarina.
Fampiharana Indostria mavesatra, Indostrian'ny varotra, Indostrialy ankapobeny, Automotifika
Ho an'ny haben'ny kofehy
Torolalana bebe kokoa momba ny fanasana lamba fisaka
1) Inona no atao hoe mpanasa lamba fisaka?
2) Inona no maha samy hafa ny mpanasa lamba fisasana sy ny mpanasa lamba?
Ny mpanasa lamba, na dia mitovy endrika amin'ny mpanasa lamba aza, dia tsy mitovy amin'ny savaivony ivelany, araka ny fomban'izy ireo, lehibe kokoa raha oharina amin'ny lavaka afovoany. Amin'ity famolavolana ity, ny mpanasa lamba dia azo apetraka ao ambanin'ny lohan'ny bolt na voanjo iray mba hanampiana hizara hery ampiharina rehefa mihamafy.
(3) Mila mpanasa lamba fisaka miaraka amin'ny mpanasa lamba ve aho?
Ny mpanasa lamba fisaka dia ampiasaina hampitomboana ny velaran'ny faritra mba hizarana ara-drariny kokoa ny hery ampiarina amin'ny fanamafisana ny fatotra. Ny mpanasa lamba dia ampiasaina mba hamoronana fihenjanana mandritra ny fihenjanana mba hanakanana ny voanjo tsy hiasa taty aoriana.
(4) Inona no mandeha amin'ny fanasan-damba fanasan-damba voalohany?
Rehefa ampiasaina tsara, ny mpanasa lamba dia mihazona ny voanjo na mpamatsy kofehy hafa. Mba hanatanterahana izany dia apetraho aloha ny mpanasa lamba, eo ambanin'ilay fatorana. Raha miantso mpanasa lamba hafa na lozisialy ny tetikasanao, tokony handeha eo alohan'ny mpanasa lamba izy ireo mba hahafahany mitazona azy ireo amin'ny toerany.
Teo aloha: Tonga any an-kianjan'i Lag Bolts Laguna - DIN933 vy malefaka kilasy 4.8 Hex baor - Tianbang Fasteners
Manaraka: DIN933 vy malefaka kilasy 4.8 Hex baoritra
Mpanasa lamba fisaka lehibe
Nylon fanasan-damba fisaka
Sofina voa, Hex Socket Bolt, Hex Socket Head Bolt, Fehikibo vatofantsika fototra, Vatofantsika fametahana vy mihantona, Bolt Coupling Nut,